अष्ट्रलिया काण्ड : भिडियो इडिट गरिएको भन्ने वास्तविकता यस्तो! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > अपराध > अष्ट्रलिया काण्ड : भिडियो इडिट गरिएको भन्ने वास्तविकता यस्तो! (भिडियो हेर्नुस्)
admin February 2, 2020 अपराध, भिडियो	0
काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनहरुमा सामाजिक सञ्जालमा अनेक खालका भिडियो भाइरल भइरहेका छन् । केही साता पहिले नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुका बीचमा चर्चामा रहेको अष्ट्रलिया काण्डको नालीबेली भिडियोमार्फत बाहिर आएको छ । नेपालीहरुले विदेशमा पढ्न गएकी युवतीको भन्दै एक भिडियो भाइरल गराएका थिए । त्यसलाई कलेज नेपाल नामको एक युट्यब च्यानलले नाटकीय रुपान्तरण गरेर भर्खरै बजारमा ल्याएको छ ।
कलेज नेपाल लामो समय देखि विभिन्न सामाजिक विषयहरुमा भिडियो बनाउँलै आएको छ । जिवेश गुरुङको लेखन, निर्देशन र सम्पादन रहेको यस नाटकमा स्वंयम जिवेश गुरुङ, कञ्चन खड्का, युगज्योती क्रियाशील, शुशीला बजगाँई, चन्द्रा पाण्डे,राम धितालको मुख्य अभिनय रहेको छ । यस भिडियोमा कञ्चन अर्थात कोमलीकालाई अष्ट्रलियामा पढ्न गएको युवतीको रुपमा देखिएको छ । उनको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल बनाउने काम जिवेश अर्थात ठुलेले गरेको देखाइएको छ । उनले भिडियो इडीट गरेर भाइरल गराएको स्विकार गरेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
वास्तविक घटनामा आधारित यस नाटकले नेपालीहरुको कागले कान लग्यो भन्दा कान छाम्न छोडेर कागका पछि दर्गुने हाम्रो सोचलाई दर्शाएको देखिन्छ । अष्ट्रलिया काण्डमा पनि पिडित भनिएकी युवतीले सा ईबर अपराध अन्तरर्गत नेपाल प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएकी छिन् । उनले शंका लागेका केही व्यक्तिहरुको नाम पनि दिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । हामीले यस खालका क्रियाकलापहरुबाट टाढा बस्न सक्नुपर्छ । नेपालीहरुले आफ्नो सोच बदल्न आवश्यक छ ।
अर्काे भिडियो पनि हेर्नुहाेसः